काठमाडौंमा डा. केसीको समर्थनमा प्रदर्शन (फोटो फिचर) | Nagarik News - Nepal Republic Media
काठमाडौं- चिकित्सा शिक्षामा सुधारको माग गर्दै जुम्लामा अनशन बसिरहेका प्राडा. गोविन्द केसीको समर्थनमा काठमाडौंमा प्रदर्शन भएको छ।
१५ औं पटकको अनशनको क्रममा जुम्लामा ८ दिन देखि अनशतरत डा. केसीको समर्थनमा माइतिघर मण्डलाबाट सुरु भएको प्रदर्शन बानेश्वरसम्म पुगेको थियो। विभिन्न प्ले कार्ड बोकेर डा. केसीका समर्थकहरु प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले चिकित्शा शिक्षा अध्यायादेशमा झेल भएको बताए। माथेमा आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा हुनु पर्ने उनले बताए। प्रधानमन्त्री केपी ओली मेडिकल माफियाको पक्षमा देखिएको भन्दै उनले जनस्तरबाटै यसको प्रतिवाद आवश्यक रहेको बताए।
सुजन श्रेष्ठ २३ असार २०७५ १ मिनेट पाठ
काठमाडौंमा डा. केसीको समर्थनमा प्रदर्शन फोटो फिचर